Home Wararka Roobkii Hargeysa ka da’ay oo burbiryay xabaalaha Sheekh Muuse Ducaale
Roobkii Hargeysa ka da’ay oo burbiryay xabaalaha Sheekh Muuse Ducaale
Xaabalaha Xaafada Sheekh Muuse Ducaale ee magaalada Hargeysa ee xaafadda Boqol-jire, ayaa noqday Qubuuro daadadkii kala danbeeyay ee roobabkii ka da’ay dhinaca koonfureed ee Hargeysa ay waxyeelo kala duwan soo gaarsiiyeen, isla markaana qubuuraha qaarkood ayaa dumay oo xabaalaha qaarna lafahoodii dooxa ku dareen.
Dadka uu xabaalahooda qaaday waxaa ka mida kuwa xiga dhanka cadceed ka soo baxa oo qaarkood xabaalihii noqdeen garbo tog ah oo maydadkii soo dhigay bannaanka. Dadka degan xaafada Boqol-jire, isla markaana la jaarka ah xaabalaha Sheekh Muuse Ducaale ayaa ugu baaqay cidkasta oo gacan ka geysan karta daryeelka xabaalahaas in ay si deg deg ah ugu soo gurmadaan, maaddama lagu jiro xilli roobabkii Gu’gu dalka ka curteen, la iskuna dayo haddii dayr loo sameyn karro ama biyaha laga duwi karro.
Xabaalahan kuwooda xigga dhanka cadceed ka soo baxa waxaa ku soo durkaysa laag weyn oo ka dhalatay daadadkii kala duwana ee ka soo rogmaday roobkii dhawaan ka da’ay dhanka koofureed ee caasimada Hargeysa, gaar ahaan dooxa ka soo rogmada xaafada Sheekh Cumar, haddii aan si deg deg ah wax looga qaban fiditaanka garbada cusub xaabalaha dhanka koonfurta xigga waa ay qaadaysa.
Sidoo kale xabaalaha xiga dhanka waqooyiga kuwa ka mida waa uu qaaday, halka kuwa kalena wakhtigii ay biyuhu dul joogeen xabaashi oo duntay. Guud ahaan xabaalaha xaafada Sheekh Muuse Ducaale waxaa ay u baahan yihiin gurmad deg dega, waxaa ku aasan culimo, waxaa ku aasan ganacsato, waxaa ku aasan wariyayaal, cidkasta oo ehelkeedu ku aasan yahay waxaa loo baahan yahay in xabaalahaasi ay si deg deg ah ugu gurmato wax ka qabashadooda.